U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 1st round of Myanmar-Nepal Bilateral Consultations Meeting – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 1st round of Myanmar-Nepal Bilateral Consultations Meeting
A Myanmar Delegation led by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of the Union of Myanmar attended the 1st round of Myanmar-Nepal Bilateral Consultations Meeting held in Kathmandu, Nepal on 30 July 2018 and arrived back to Yangon on 1 August 2018.
The signing ceremony of the MoU on the establishment of Bilateral Consultation Mechanism between the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and the Ministry of Foreign Affairs of Nepal and the Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Government of the Federal Democratic Republic of Nepal on Exemption of Visa Requirements for Holders of Diplomatic and Official (Special) Passports was held in the morning of 30 July 2018 at Yak & Yeti Hotel in Kathmandu followed by the 1st round of Bilateral Consultations Meeting.
The meeting was co-chaired by U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Myanmar and Mr. Shanker Das Bairagi, Foreign Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Nepal. The Myanmar delegation comprising of U Myint Thu, Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs, Thiri Pyanchi U Tun Nay Lin, Myanmar Ambassador to Nepal and responsible officials from the Ministry of Foreign Affairs and the Myanmar Embassy in Kathmandu attended the meeting.
At the Bilateral Consultations, both sides extensively discussed wide range of issues relating to the promotion of the bilateral relations and multi-faceted cooperation including trade, investment, tourism, connectivity, human resources development, cooperation in regional and international arenas, climate change, poverty reduction and other security matters as well as potential areas of future cooperation between the two countries.
The Nepal Foreign Secretary Mr. Shanker Das Bairagi hostedalunch to the Permanent Secretary U Myint Thu and the Myanmar delegation in the afternoon on the same day.
In the evening of 29th July 2018, the Permanent Secretary and delegations visited the Myanmar Embassy in Kathmandu and met with the Ambassador, staff and family members of the Embassy.
On 31st July 2018, U Myint Thu, the Permanent Secretary called on Mr. Ram Bahadur Thapa, Nepalese Minister for Home Affairs and Acting Foreign Minister at the Ministry of Home Affairs of Nepal. During the meeting, they discussed and exchanged views on matters pertaining to promotion of bilateral relations and cooperation between Myanmar and Nepal as well as on regional and international issues of mutual interests.
The signing of the Agreement on Exemption of visa requirements for holders of diplomatic and official passports between Myanmar and Nepal, allows the officials of both countriesastay of up to 90 days without visas.
Dated, 1st August 2018
မြန်မာ-နီပေါ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူ ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် နီပေါနိုင်ငံ၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို့၌ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-နီပေါ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနများအကြား ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ မကျင်းပမီ ၃၀-၇-၂၀၁၈ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများအကြား ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ အစီအမံ ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာချွန်လွှာနှင့် သံတမန်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်​ကိုင်ဆောင်သူများအား ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ဆိုင်ရာ နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီချက်များကို လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ကတ္တမန္ဒူးမြို့၊ Hotel Yak and Yeti ၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့် နီပေါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Mr. Shanker Das Bairagi တို့မှ ပူးတွဲသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာဘက်မှ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူနှင့်အတူ နီပေါနိုင်ငံဆိုင်ရာမြန်မာသံအမတ်ကြီး သီရိပျံချီ ဦးထွန်းနေလင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာနနှင့် မြန်မာသံရုံး၊ ကတ္တမန္ဒူးတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ပထမအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နီပေါနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်သွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ပေါင်းစပ်ဆက်သွယ်မှု၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်းအစည်းအဝေးများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် နှစ်နိုင်ငံအကြားအကျိုးတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် ကဏ္ဍများကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နီပေါနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးအတွင်းဝန် Mr. Shanker Das Bairagi မှ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား အလုပ်သဘော နေ့လယ်စာဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် ၂၉-၇-၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် မြန်မာသံရုံးသို့ သွားရောက်ကာ သံအမတ်ကြီး၊ သံရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးမြင့်သူသည် ၃၁-၇-၂၀၁၈ ရက်၊ နံနက်ပိုင်းတွင် နီပေါ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနှင့် ခေတ္တနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mr. Ram Bahadur Thapa အား နီပေါပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၌ သွားရောက် ဂါရဝပြုတွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးအမြင်ချင်း ဖလှယ်ခဲ့သည်။
နှစ်နိုင်ငံအကြား လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့် ပြည်ဝင်ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့် သဘောတူညီချက်အရ နှစ်နိုင်ငံမှ သံတမန်နိုင်ငံကူး လက်မှတ်နှင့် အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများသည် ပြည်ဝင်ဗီဇာမလိုဘဲ ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိ နေထိုင်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁ ရက်